दान कसलाई दिने? – Islam Guide
दान कसलाई दिने?
डिसेम्बर 31, 2017 Comments
(तपाईंको दान) فهد بن سالم باهمام द्वारा
जकातको रकम कुन क्षेत्रमा र कसरी खर्च गर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई इस्लामले हदबन्दी गरेको छ। एक हकदार वा अधिक हकदारहरुलाइ दिन सक्छ। त्यसैगरी दानको रकम मुस्लिम हकदारसम्म पुर्याउने संघ-संस्थाहरुलाई दिनु जायज छ। आफ्नै गाउँमा रहेका हकदारहरुलाई दान दिनु बेस हुन्छ।
दानका हकदार व्यक्तिहरु निम्न हुन्-
१) गरीब र दीन-दु:खीहरु, जसलाई दुई छाक टार्न र दुई सरो लाउन धौ-धौ परेका हुन्छन्।
२) दान असुल्ने र वितरण गर्ने व्यक्तिहरु।
३) दास, जो आफूलाई मालिकबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छ, त्यसलाई स्वतन्त्र पार्न दानको रकम दिनु जायज छ।
४) ऋणी, जो ऋणको बोझले दबेको छ र त्यसलाई चुक्ता गर्न सकिरहेको छैन, यद्यपि सर्वसाधारणको लागि ऋण लिएको होस् वा निजी कामको लागि।
५) अल्लाहको बाटोमा युद्ध गर्ने (मुजाहिद) हरु, जो आफ्नो धर्म र देशको लागि लडिरहेका हुन्छन्। इस्लामको आह्वानमा सक्रिय धर्मगुरु यसै अन्तर्गत पर्दछन्।
६) नयाँ मुस्लिमहरुको सान्त्वना वा जुन गैर-मुस्लिमको इस्लाममा आउने आशा हुन्छ, उनीहरुलाई दान दिन सकिन्छ, तर यो मुस्लिमको जिम्मेवार हाकिम र दातृ संघ-संस्थाले आवश्यकता अनुसार गर्ने काम हो।
७) यात्री, पैसा सिद्धिएको बटुवाहरुको बाटो खर्च जुटाउन दानको रकम खर्च गर्न सकिन्छ, चाहे त्यो आफ्नो मुलुकमा धनवान किन नहोस्।
जकातका हकदार व्यक्तिहरुको वर्णन गर्दै अल्लाहले भन्नु भएको छ… “वास्तवमा जकात (दान) केवल दरिद्रहरु, दीन-दु:खीहरु, दान असुल्ने व्यक्तिहरु, तालिफे कल्ब (हृदयलाई जोड्न), दासहरुको मुक्ति, ऋणीहरुको ऋण भुक्तानी, अल्लाहको बाटोमा खर्च गर्न र यात्रुलाई दिनको लागि हो।” (श्रोत- सूरह अत्-तौबा : ९/६०)
वर्ग: तपाईंको दान